နေ့များ: စံပယ်ဖြုဖြူ နှင့် နှင်းဆီနီနီ တို့တွင်ကိုယ်စားပြုမှုမရှိ
စံပယ်ဖြုဖြူ နှင့် နှင်းဆီနီနီ တို့တွင်ကိုယ်စားပြုမှုမရှိ
ပမာဆိုရသော် မျှားနတ်မောင်ပုံလေးကအချစ်စတင်မှု။ ဖူးစာ။ သို့သော်ဒီသင်္ကေံတကိုကျော်မမြင်ပဲ
ပြန်ပြီးထုတ်လုပ်ဆင့်ပွားထားမှုများသာဖြစ်သည်။ ကော်ပိုရိတ် လိုဂို (LOGO) တွေမှာဒီသဘောကို
အထင်အရှားတွေ့ရသည်။ ပို့စ်မော်ဒန်လက်ရာတခုတွင်ယှဉ်တွဲထားသည့်အမှတ်အသားများ (sign)
သည်ဘာကိုမှကိုယ်စားမပြု။ အ၀ိုင်းဘေးတွင်ယှဉ်ထားသော တြိဂံပုံသည်သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇတ်လမ်းကို
ကိုယ်စားမပြု။ သူ့အဆင်ပြေသလိုဒီဇိုင်းဆင်ထားခြင်းသာဖြစ်သည်။ သတင်းစာ တွင်ပုံရိပ်များတခုနှင့်တခု
အလွန်ဆုံးကျနော်တို့လုပ်နိုင်တာက အမှတ်အသား တခုရဲ့ပြောနိုင်တွေးနိုင်တဲ့အချက်တွေကို အခြား
အမှတ်အသား တခုရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေသဘောတရားတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ဖို့ဖြစ်သည်။ နှင်းဆီပန်းဟာဘာလဲ
ဓါးသွားဟာဘာသဘောကိုဆိုချင်တာလဲ။ ပို့စ်မော်ဒန်ဟာ ဒီ၂ခုကြားကဆက်စပ်မှု ကိုလည်းမရှာ။
နှစ်ခုစလုံးကညွှန်းဆိုမဲ့ပြင်ပကအစစ်အမှန်တရားဆိုတာလည်းမရှိ ဟုဆိုသည်။ code တွေက၀ှက်ထားတဲ့
အဖြေကိုရှာတာ decoding ဒါမော်ဒန် ။ ခုပုံစံကိုတော့ transcoding လို့ဆိုသည်။ ပို့စ်မော်ဒန်။
ငယ်ငယ်ကကြည့်တဲ့ ပန်းစင်္ကြာံမှန်ပြောင်းနှင့်တူသည်။ တခါကြည့်တယ် လှည့်တယ် နောက်တခါကြည့်တယ်။
ပုံရိပ်တခုချင်းဆီမှာဘာအဓိပ္ပါယ်ရှိမလဲ။ မရှိ။ ရည်ရွယ်ချက်က မဆုံးနိုင်တဲ့မျိုးကွဲပုံစံတွေ
ခုခေတ်တွင်တီဗွီ။ ချယ်နယ်တွေတခုပြီးတခုပြောင်းကြည့်သည်။ မြ၀တီ မြန်မာ့အသံ ကိုရီးယားကား သတင်း
Posted by KZကေ at 00:44
T2A December 10, 2009 at 2:45 PM
အစစ်အမှန်တရားကို သင်္ကေတတွေ အမှတ်အသားတွေနဲ. ဖော်ပြတဲ့နေရာမှာ လူအများလက်ခံထားတဲ့ အချက်အလက်ဘောင်ထဲကဖြစ်နေသရွေ. ပြဿနာမရှိနိုင်ဘူးထင်ပါတယ်။ ပြထားတဲ့ မျှားနတ်မောင်ရုပ် ဥပမာလိုပေါ့ လူတိုင်းက အဲဒီအရုပ်လေးကိုမြင်ရင် ဒါဖူးစာရေးနတ်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်။ ဒီဥပမာက တစ်ကမ္ဘာလုံးက လက်ခံထားတဲ့ အသိတစ်ခုကို ညွှန်းဆိုနေတဲ့ Interpretation တစ်ခုပေါ့။ ကျွန်တော်တို.ဆီက ပဒေါင်အမျိုးသမီးတွေအကြောင်းစဉ်းစားကြည့်ရအောင်…လည်ပင်းမှာ ဘော်ကွင်းတွေစွပ်ထားရင် တင့်တယ်လှပတယ်လို. ယူဆကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျန်တဲ့ကမ္ဘာကလူတွေက သူတို.ညွှန်းဆိုချင်တဲ့ အချက်ကို နားမလည် သူတို.အညွှန်းရဲ. နောက်ခံအခင်းအကျင်းကိုလည်း သိမထားတော့ ထူးဆန်းတာတစ်ခုကလွဲလို. ဘာမှခံစားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ထို.အတူပဲ ကဗျာတစ်ပုဒ်ထဲက သင်္ကေတတစ်ခု ဆိုပါတော့… ကဗျာရေးသူကတော့ သူတစ်ခုခုကို ခံစားလိုက်ရလို. ဒီသင်္ကေတနမိတ်ပုံကိုသုံးလိုက်တာပါ။ သူ.အတွက်တော့ တစ်စုံတစ်ရာကို အတိအကျ ခံစားလိုက်ရမှာအသေချာပါ။ ဒါပမယ့် ကဗျာဖတ်သူအတွက်တော့ တစ်မျိုးတစ်ဘာသာဖြစ်သွားပြီ။ သူကကျတော့ ဒီသင်္ကေတနိမိတ်ပုံကို ကဗျာရေးသူ ခံစားရသလို ခံစားချင်မှခံစားရမှာပါ။ သူကြိုက်သလို၊ သူမြင်သလိုပဲ ခံစားမှာပါ။
ဒီနေရာမှာ ကွဲလွဲမှုစတယ်လို.ထင်တာပါပဲ….ဘာလဲဆိုတော့ ကဗျာရေးသူ ပြောပြချင်တဲ့ ညွှန်းချင်တဲ့ အညွှန်းခံနဲ. ကဗျာဖတ်သူ ခံစားသိမြင်လိုက်ရတဲ့ အညွှန်းခံ တစ်နည်းအားဖြင့် အစစ်အမှန်တရားတို.ဟာ ထပ်တူညီချင်မှတူမှာပါ။ ဒါကြောင့်မို.ပဲ ကဗျာတွေဖတ်ရတာ နားမလည်ဘူးဖြစ်လာတာပါ။
ကျွန်တော့်အမြင်ပြောရရင် သင်္ကေတတွေဟာ တစ်စုံတစ်ခု အနည်းဆုံးတော့ စာရေးသူပြောချင်တဲ့ အစစ်အမှန်တစ်ခုကို ညွှန်းဆိုနိုင်ပါတယ် ။အများရဲ. သိစိတ်ကလက်ခံမှု လက်မခံမှုကိုမူတည်ပြီးမှ ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ နိမိတ်ပုံသင်္ကေတတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို.ပဲ ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်။
T2A December 10, 2009 at 2:50 PM
နောက်တစ်ခု ဆွေးနွေးချင်တဲ့အချက်တစ်ခုက အောက်မှာရေးထားတာတွေပါပဲ။
ဒီအချက်နှစ်ခုဟာ တစ်ခုနဲ.တစ်ခု Logical ဖြစ်မနေပါဘူး…ရှေ.မှာပြောထားတာက အမှတ်အသားတွေက သူ.ဘာသာဖြစ်တည်နေပြီး ပြင်ပက ဘယ်အစစ်အမှန်တရားကိုမှ ကိုယ်စားမပြုဘူးလို.ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒုတိယ ဖော်ပြချက်မှာတော့ တစ်ခုခြင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်မှုရှိတယ်လို. ဆိုထားပါတယ်။ ဒါဆိုရင် တစ်ခုခြင်းဆီက ဘယ်လိုကိုယ်ပိုင်ဖြစ်နေတာပါလဲ။
စုစည်းဖော်ပြမှုသဘောမသက်ရောက်တာကတော့ ထားပါတော့။ စုစည်းဖို.လိုအပ်ရင် စုစည်းမယ်။ မလိုအပ်ရင် မစုစည်းဘူးပေါ့။ နားလည်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ထင်တာကို အချုပ်သဘောပြောရရင် အစစ်အမှန်တရားတစ်ခုကို ညွှန်းဆိုဖို.ကိစ္စဟာ သိစိတ်ရဲ.ဘောင်ကို ဘယ်လောက်ထိချဲ.ထွင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာ မူတည်တယ်ထင်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်စေ…အခုလို ရေးသားဝေမျှတဲ့အတွက်တော့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
KZကေ December 10, 2009 at 10:58 PM
၁။ မော်ဒန်ကနမိတ်ပုံသုံးတယ်။ သုံးတဲ့နမိတ်ပုံရဲ့အနက် (သို့) နောက်ကွယ်မှာရှိနေတဲ့ အချက်တခု (ဆိုပါစို့ reality) ကိုမရောက်မှာပူရတာ။ ပို့စ်မော်ဒန်ကဒါကိုမပူဘူး သူကအဲသည်လိုနမိတ်ပုံမျိုးမသုံးလို့ ဒါကွာတယ်လို့ဆိုချင်တာပါ
၂။ စနေနေ့။ဒီနေ့ဘဏ်နေ့တ၀က်ပဲဖွင့်မည်။ ကျနော်ရောက်သွားတော့စောသည်။ တံခါးပင်မဖွင့်သေး။ သို့သော် လူတယောက်တော့ရောက်နေပြီ။ အသားဖြူဖြူ ၀ဖိုင့်ဖိုင့် ရွှေကိုင်းမျက်မှန်နဲ့ လက်ကိုင်အိတ်နဲ့။
ဥပမာပေးလိုသောအရေးအသားပါ။ နေ့တ၀က်သည် အချိန်သိပ်မရနိုင်တာကိုပြောချင်တာလား။ ဘဏ်ဆိုတော့ထိမ်းသိမ်းထားတာတခုခုကိုထုတ်သုံးမယ်ဆိုတဲ့ သဘောလား။ sign တွေကိုကြည့်ပြီးစာသားထဲမှာမပါတဲ့ပြင်ပကconcept/ fact/ reality တွေကိုရှာတယ်။ သို့သော် ဒါတွေကိုကိုယ်စားမပြုပါ။
အသားဖြူတယ်။၀တယ်။ရွှေကိုင်းမှန်နဲ့။လက်ကိုင်အိတ်။ မဟုတ်မှလွဲရော တရုတ်စီးပွားရေးသမားပဲ။ အဲသည်လိုစုစည်းဖော်ပြမှုပုံစံမျိုးမရှိပါ။ တခုချင်းမှာတော့ မျက်မှန် လက်ကိုင်အိတ် လူနဲ့လူ့အသုံးအဆောင်တွေ ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
PS. ခုစာရိုက်ရင်းသက်ပြင်းသုံးခါချပါသည် ကိုယ့်ဆရာ။